फर्मी विरोधाभास। सम्भावित समाधान र जीवनको अस्तित्व जान्नुहोस् | नेटवर्क मौसम विज्ञान
एक पटक भन्दा धेरै तपाईंले सोच्नु भएको छ यदि हाम्रो ग्रह केवल एक मात्र होईन सौर्य प्रणाली जुन बस्न योग्य छ, तर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा केवल एक हो। सम्भवतः कुनै ग्रह बस्न योग्य छ यदि यसले केही सर्तहरू पूरा गर्दछ जुन यसले जीवनको विकास गर्न अनुमति दिँदछ। यद्यपि, यो असम्भव छ कि त्यहाँ अर्को ग्रह छ जुन आदर्श सर्तहरू पूरा गर्दछ? ग्रहमा जीवन पाउनको लागि त्यहाँ तरल पानी हुनु आवश्यक छैन। हामीलाई थाहा छ कि त्यहाँ ग्रहहरू छन् जहाँ पानी छ, तर यो तथाकथित "बस्ने क्षेत्र" मा छैन र, त्यसैले जीवनको विकास भएको छैन। यदि त्यहाँ अन्य ग्रहहरूमा जीवन खोज्ने जति सम्भावना छ फर्मी विरोधाभासहामीले किन फेला पारेनौं?
यस लेखमा हामी तपाइँलाई बुझाउन जाँदैछ कि फर्मी विरोधाभास के हो र यसले हामीलाई व्याख्या गर्न कोसिस गर्दछ। के त्यहाँ अर्को ग्रहमा ब्रह्माण्ड भरमा जीवन हुन सक्छ? हामी तपाईलाई सबै कुरा बताउँछौं।
1 फर्मी विरोधाभास के हो?
2 टेक्नोलोजी र दूरी: दुई सीमितता
3 हामी कस्तो प्रकारको सभ्यता हौ?
4 सबै कहाँ छन्?
फर्मी विरोधाभास के हो?
फर्मीको विरोधाभास सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक विज्ञान बीचको विरोधाभास हो। वैज्ञानिकहरूको अनुसार, अर्को ग्रहमा बौद्धिक जीवन खोज्ने लाखौं संभावनाहरू छन् सारा ब्रह्माण्ड मा, तर अहिले सम्म, यो अहिले सम्म केहि वा कसैको सामना गरेको छैन।
आज, बेरेजिन नामक वैज्ञानिकले यस सिद्धान्तलाई नयाँ व्याख्या दिएका छन् र फेर्मि विरोधाभासको समाधान फेला पारेका छन्। यद्यपि यो समाधान अनुमान गर्न सजिलो छैन, किनकि सायद यो तपाई सुन्न चाहानु हुने परिणाम होईन। बेरेजिनका अनुसार मान्छेले अर्को बौद्धिक सभ्यता कहिलै पनि पाउँदैन। हामी एक दौड र रूप मा विकसित गर्न जारी हुनेछ ग्रह पृथ्वी बस्न योग्य बन्द हुनेछ वा अर्को सभ्यता फेला पर्नु अघि अदृश्य हुनेछ। यो हाम्रो तारा, सूर्य को आसन्न विनाश को कारण हो।
यसले ब्रह्माण्डमा कस्तो प्रकारको सभ्यता छ भनेर फरक पार्दैन। यदि तिनीहरू बौद्धिक संस्था हुन् भने तिनीहरू हाम्रो भन्दा बाहिर मेशिनरी प्रयोग गर्छन्, यदि तिनीहरू सामूहिक बुद्धिमत्ता, आदि आदि छन् भने। यो सबै कुरा मतलब छैन। केवल कुरा मात्र महत्व छ कि हामीले भेट्न सक्ने सभ्यता मानवको लागि "नजिक" र व्यवहारिक दूरीमा छ। जे होस् फर्मी विरोधाभास भन्छ कि सांख्यिकीय, अर्को ग्रहमा जीवन खोज्ने ठूलो सम्भावना छ, आज सम्म यो मामला त्यस्तो भएको छैन।
टेक्नोलोजी र दूरी: दुई सीमितता
सभ्यताहरु हामी भन्दा फरक छन् भने यो बेकार छ, यदि तपाइँ र हाम्रो दुवै प्रविधि ग्रहहरु बीचको दूरी कभर गर्न पर्याप्त छैन। विरोधाभासको उदाहरण द्वारा वर्णन गरिएको छ कि ज tree्गलको बीचमा रूख यो तल झर्छ र हल्ला गर्दैन किनभने त्यहाँ सुन्न कोही छैन। आवाज र आवाज मात्र अवस्थित छ किनभने त्यहाँ कोही छन् जसले तिनीहरूलाई सुन्नुहुन्छ। अर्को सभ्यताको सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। ब्रह्माण्डभर हजारौं सभ्यताहरू हुन सक्दछन्, तर एकै समयमा तिनीहरू हाम्रो लागि अवस्थित हुनेछैन किनकि हामी तिनीहरूलाई कहिले देख्न सक्दैनौं।
मानौं कि बौद्धिक दौड ग्रहहरू बीच यात्रा गर्न सक्षम भइरहेको स्थानमा विकसित गर्न सक्षम छ, तर यसको मार्गको बीचमा यसले यसलाई पत्ता लगाउनु अघि अर्को जीवनको ट्रेस मेटाउन सक्षम छ। जब यसले अर्को सभ्यता पत्ता लगाउँदछ, यसले हामीलाई सीमित पनि गर्दछ।
हामी कुरा गरिरहेको छैन कि युद्ध, विजय वा स्रोतको शोषणको कारण दौड विलुप्त हुनु पर्ने कारण हो, तर यो पूर्ण नरसंहार हो, तात्कालिक तर पूर्वेक्षण होइन। त्यसो भए यो उदाहरणको साथ राम्ररी बुझ्न सकिन्छ: जब कुनै व्यक्तिले भवन निर्माण गर्दछ, तब सम्भव हुन्छ कि जग्गा फुट्ने प्रक्रिया सम्पूर्ण एन्थिल र यसमा बस्ने सबै व्यक्तिहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्। स्पष्टतया, यो उद्देश्य वा खराबबाट गरिएको थिएन, तर मानिस र कमिलाहरू बीचको भिन्नताका कारण, हामीलाई यो पनि थिएन कि त्यहाँ थियो।
हामी सोच्दैनौं कि कमिलाहरू एक प्रजाति हो जससँग हामी संवादमा सामेल हुन सक्छौं र कुराकानीहरू स्थापना गर्न सक्छौं। ब्रह्माण्डमा बाँकी अन्य प्रजातिहरू वा सभ्यताहरूको साथ पनि यस्तै केही हुन सक्छ।
हामी कस्तो प्रकारको सभ्यता हौ?
यस बिन्दुमा यो हुन्छ जब हामी सोच्छौं कि, यदि हामीले कमिलाको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छौं, के हामी अन्य दौडहरूको लागि कमिलाहरू छौं? एक रेस को रूप मा हाम्रो प्रोफाईल व्याख्या गर्न को लागी, हामीले मानवशास्त्र सिद्धान्त लागू गर्नु पर्छ। यो ब्रह्माण्डमा जीवनको अस्तित्वको बारेमा कुनै सिद्धान्त हो यसले मानव जातिलाई एक जातिको रूपमा अवस्थित हुन अनुमति दिनुपर्दछ। यो हाम्रो कार्बन आधारित संरचना र ब्रह्माण्डको धेरै विशिष्ट क्षेत्रहरूमा यसको अस्तित्वको कारणले हो।
यो मानवशास्त्रीय सिद्धान्तको साथ, हामी फर्मि विरोधाभासको समाधान दिनेछौं। यसको मतलब यो हो कि यसको एक मात्र समाधान भनेको हामी ब्रान्डमा अन्य प्रजातिहरू वा अन्य प्रकारका सभ्यताको लागि कमिला हौं। यदि जीवनको सम्भावना धेरै छ र हामीले यो फेला पारेनौं भने केवल एक मात्र व्याख्या यो हो कि, उनीहरूको लागि, हामी या त ज्ञानीय वा तुच्छ हो।
हामी यसको विपरित पनि भेट्छौं। हामी महान फिल्टरमा आइपुगेका र पास गर्ने पहिलो हौं र यसैले हामी अन्त्य सभ्यताको विनाशक पनि हुनेछौं।
सबै कहाँ छन्?
Fermi विरोधाभास देखि कुनै व्यवहार्य समाधान छ, हामी केवल केहि अनुमान लगाउन सक्छौं। ब्रह्माण्डमा यसको सृष्टि भएपछि हाम्रो सूर्य उमेरमा धेरै कान्छी छ बिग बैंग। तसर्थ, यो अनुमान लगाउन सकिन्छ कि त्यहाँ त्यस्तै ग्रहहरू छन् जुन उनीहरूसँग सम्बन्धित ताराको बसोबास गर्ने क्षेत्र भित्र छन् र जसको सभ्यता हाम्रो अगाडि विकसित भएको छ।
यदि यो हो भने, तिनीहरूको टेक्नोलोजीले हाम्रो भन्दा बढि विकास गर्न सक्षम भएको छ तर, यद्यपि यो स्थिति हुन सक्दछ, तिनीहरूले अझैसम्म हामीलाई छुट्याउने दूरी पार गर्न सक्दैनन्। सोच्नुहोस् कि यदि टेक्नोलोजीको बिन्दुमा विकास भयो जुन हामीले ग्रहको सबै उर्जा प्रयोग गर्न सक्दछौं, तब सूर्यको पूर्ण र अझ बढी प्रयोग गर्नुहोस् ताकि मिल्की वेको उर्जा प्रयोग गर्दा हामी ब्रह्माण्डमा पत्ता लगाउन विस्तार गर्न सक्दछौं। नयाँ सभ्यता वा अरू धेरैलाई नष्ट गर्नुहोस्। हामीलाई पनि त्यस्तै हुन सक्छ।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीले तपाईंलाई मुद्दा स्पष्ट पार्न मद्दत गरेको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » फर्मी विरोधाभास